Voice of the Voiceless: With Emphasis on Oromo in Horn of Africa: Qabsoo Teenyaa Irraa Hubaafi Xurii Haa Eegnu!
( Saphalo Kadiir irra)
Akkuma beekkamu yeroo hedduu dhimmi qabsoo teenya laamsheessu keessa tokko basaastuufi ololtuu diinaati. Roga biraatiin ammaas namoonni gariin dhimma dhunfaa fidee adeemsa qabsoo keessatti makee warraaqsa gufachiisuuniis hudhaafi gufuu qabsoo teenyaati. Mufannaa nama dhunfaa waliin qabuuf namni gariin aaraafi hijaa bahuuf gara qabsoo makamee maqaaf mataas wal balleessuun qabsoo Oromootti xurii makaa turuun seenaa kaleessaati. Kana malees alagaan adeemsa qabsoo Oromootti diinaafi adawwii baayyisuuf qabsaawaa haqaa of fakkeessee tooftaan namuma qulqulluu maqaa xureessuun akka waan qabsoon Oromoo hawaasaafi saboota biraatiif jibba qabduu fakkeessuun akka hijaan nutti baayy'attu godhuun qabsoo laaqaa warreen turaniis beekkamaa dha.
Haaluma kanaan yeroo ammaa kanaas namoonni gariin hijaa dhunfaan waliif qabu bahuuf maqaa namoota tokko tokkoo kanuma jibbaafi balfa qabsoo Oromoo hin qabne basaastummaan faalee erguun "abalu basaastuu dha, ilmaan Oromoo ajjeesisaa, hiisisaa jira" jechuun maqaa wal xureessuun fuula interneetiifi miidiyaa hawaasaa irratti akka baafamuufi tarkaanfiin irratti fudhatamu godhuun jalqabamee jira. Kana jechuun kiyya immoo namni basaastuudha jedhamee gabaafamaa jiru marti qulqulluudha jechuu koo miti. Akkasuma namoonni gabaasaa jiru martiis dhuguma gabaasaa jiraan jechuuniis hin danda'amu. Haatahuu malee diinniis qabsoo Oromootti gufuufi labbagal baayyisuuf tooftaa kanatti fayyadamuu jalqabee jira. Kun immoo xuriifi huuba qabsoo teenyatti maka waan taheef of eeggannoon tahuu qaba.
Kanaaf ilmaan Oromoo kan dhuguma quuqama qabsoo qabdan kan namoota basaastuufi gantuu tahan gabaaftan sirritti qulqulleeffachuun gabaasuun dirqama taha. Namni gantuufi basaastuu tahe dirqama gabaafamuu fi fuula interneetii irratti baafamuu qofa osoo hin taane tarkaanfiin qabatamaan irratti fudhatamuus qaba. Garuu osoo gara tarkaanfii hin deemne dura tartiiboota itti fayyadamuu qabnu sirritti eegachuun gaariidha. Osoo hin gabaafamne dura tartiiba armaan gadii kana osoo eegnee gaariidha jedheen yaada.
1) Nama tokko dhugumaan basaastuu tahuun isaa qabatamaan mirkaneeffachuun dirqama. Nama tokko waanuma mufannaafi jibba dhunfaa irraa qabnuuf basaastuudha jennee maqaa xureessuun qabsoo teenyatti diina baayyisuu daran adeemsa qabsoo teenyaatiis ni xureessa waan taheef hijaa dhunfaan qabnu osoo qabsootti hin makne dhunfumaan osoo bahannee gaariidha.
2) Nama basaastuu tahuun isaa hojii qabatamaafi ragaa guutuun mirkanaa'eefi sirritti beekkame tokko dura tooftaa adda addaatiin gorsuu, akeekkachiisuufi dinniinuun gaarii dha. Nama isatti dhihaatuufi sirritti isa beekuuniis gorsisiisuuniis barbaachisaa dha. Yoo namni kun ammallee diinummaan kan gocha hammeenya isaa irraa hin deebineefi hin adabanne tahe immoo gabaasuu bira dabree tarkaanfii cimtuu irratti fudhachuulleen rakkoo hin qabu.
3) Yeroo gabaafamu namni fuula interneetii irratti maxxansu dura immoo kallattii adda addaan namoota biraa kan naannoo san jiran irraa qoratee basaasummaa isaa mirkaneeffachuu qaba. Namni maxxansuuf deemu san immoo eega basaasa tahuu nama sanii mirkaneeffate booda immoo balleessaa isaa tokkoo lamaan karaa qaxxaamuraan namoota biraa irraa qoratee tartiibeessee kaayuu dura tooftaa addaatiin qorachuun kaayuun gaariidha.
4) Gama biraatiin nama basaasa tahuun isaa mirkanaawe tokko fuula interneetii irratti maxxansuun sodaachisuufi naasisuu danda'uu mala. Naasisuufi sodaachisuun immoo adabachiisuu hin ta'u. Inumaatuu tooftaa kun akka inni hojii diinummaa isaa inaadaafi aariin itti fufu godhuu daran of eeggannoo guddaan of eewaluuf akka inni dhimmamu taasisa. Kun immoo osoo nuti tarkaanfii irratti hin fudhanne nu jalaa miliqsuu mala. Kanaaf fuula interneetii irratti maxxansuu dura namoota humna qaban jajjaboo jalatti goonee eega ukkamsanii butan booda bakka kophaa geessuun badii isaa akka of saaxilu godhuun viidiyoo irraa waraabanii san fuula interneetii irratti maxxansanii gaarii dha. San booda tarkaanfii barbaadame irratti fudhachuun rakkoon qabu jedheen yaada.
Posted by Hasan Ismail at 4:12 PM